Owesifazane onamandla kunabo bonke emlandweni we-Kama - Afrikhepri Fondation
ulwesihlanu, januwari 22, 2021
Welcome AMAFOMANA AFRIKA
Owesifazane onamandla kunabo bonke emlandweni kaKama
Aimanishakheto ibhalwe ngezinhlamvu zegolide ngokwesiko lamaqhawe amade laseNubia (eSudan). Lesi sizwe esazala iGibhithe likaFaro futhi salisindisa ekuhlaselweni kwamanye amazwe ngesikhathi sobukhosi bama-25 bukaTaharqa noShabaka, ngobuqhawe samisa ukwethulwa kwamaPheresiya e-Afrika ngo -525 ngaphambi kokuyekisa ama-Arabhu ngekhulu lesi-7.
Ukutholwa kwemivubukulo kusivumela ukuthi siqinisekise ukuthi izimfanelo zesikhathi esizayo zobukhosi baseGibhithe zazikhona ngaphambili eNubia. Singalinganisela eminyakeni engama-5700 ubude bombuso waseNubia, owachithwa kuphela ngamakoloni amaNgisi. Leli yirekhodi eliphelele lokuphila isikhathi eside kombuso emlandweni.
Phakathi nokuhlasela kweGibhithe amaRoma ekuqaleni kwenkathi yobuKristu, uMbusi Kesari Agasti ekuphakameni kwamandla akhe waphoqa amabutho akhe eNubia. Indlovukazi u-Amanishakheto ngokwakhe uthatha umyalo webutho lakhe. Ekhanda lamasosha akhe, uphethe amaRoma futhi ulahle iso ngesikhathi sempi. Ngaphandle kokudangala, lo mcimbi uphinde uvuse isibindi sikaKandake (Candace) ojoyina empini kuze kube yilapho esinqobe amaRoma, emangele ukungabi nobuqili namandla akhe.
Siphawula ukufana phakathi kukaKandake nelinye lamagama aphethwe ngamakhosi aseSonghaï, eKanda. “U-Amani” oqukethwe igama lendlovukazi igama likankulunkulu u-Amon, onguNkulunkulu oyedwa we-Afrika emnyama. Ubuqhawe buka-Amanishakheto babunjalo ukuthi zonke izindlovukazi ezazimlandela zaziphethe isihloko sikaKandake nenganekwane yakhe zaqhubeka ziphila endulo.
SOURCE: I-Unit Cultural of Black Africa, Cheikh Anta Diop, ikhasi 54.
Umlando wase-Afrika-umlando wase-Afrika
chofoza ukuze ufunde kabanzi ...
isigaba AMAFOMANA AFRIKA
I-Maca inyusa ukuzala futhi ilwa nemiphumela emibi yokunqamuka kokuya esikhathini
Louise XIV kanye ne-Afrika emnyama - uTidiane Diakité
UJames Edward West, umsunguli we-microphone ze-1962
Buka ukuthi kungani ngishade naye (2012)